ब्यानर न्यूज Archives - Page2of 32 - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
१३ आश्विन २०७५, शनिबार ०१:५७ September 30, 2018 Nonstop Khabar
२०५४ सालमा नेपालभर स्थानीय चुनाव हुँदैथियो । उमेरले हामी बच्चा नै थियौं । सामान्य खाने, खेल्ने, घरपरिवार, आफन्त बाहेक धेरै कुराको केही पनि ज्ञान थिएन । चुनावको बारेमा गाउँघरमा हुने कुराहरुले अलिकति उत्सुकता जागेर हुनुपर्छ, महिना र गते त सम्झना छैन तर मतदान हुने दिन मतदान केन्द्रतिर हिड्यौं । मतदान केन्द्र घरदेखि करिब १० मिनेट […]
काठमाडौं, १८ जेठ । विभिन्न सामाजिक काममार्फत चर्चाकाे शिखरमा पुगेका कलाकार सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ विर अस्पतालकाे सरसफार्इमा अाएर विवादमा परेका छन् । विरअस्पतालकाे पूरै अनुहार फेर्ने भन्दै कम्मर कसेर लागेकाे ‘धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेशन’ले चन्दा उठाएकाे अाराेप लागेकाे छ । बाहिर उठ्ने सामान्य अालाेचना र अाराेप त छँदै थिए त्यसमाथि सरकारले नै उक्त […]
काठमाडाैं, १७ जेठ । ३३ किलाे सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएर फरार रहेका नेपाल प्रहरीका एसएसपी श्याम खत्रीले अन्तत: अदालतसमक्ष अात्मसमर्पण गरेका छन् । खत्रीलार्इ सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणका अभियुक्त बनाइ खत्रीका विरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकाे छ । उनी बिहीबार बिहानै जिल्ला अदालत माेरङमा अात्मसमर्पण गरेका हुन् । उनी अहिले […]
१५ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०९:१५ May 30, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडौं, १५ जेठ । जनयुद्धकालको मुद्दामा जेल सजाय काटिरहेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य बालकृष्ण ढुंगेल रिहा भएका छन् । द्वन्द्वकालिन मुद्दालाइ सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग बनाएर हाल गर्ने भनिए पनि ढुंगेललाई उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा जेल सजाय तोकिएको थियो । जेल सजाय भोगिरहेका बालकृष्ण ढुंगेलले ४० प्रतिशत कैद अवधि भुक्तान गरेको आधारमा सजाय माफी पाएका […]
१३ जेष्ठ २०७५, आईतवार ११:५६ May 29, 2018 Nonstop Khabar
हेटौडा, १३ जेठ । क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपाल मकवानपुर शाखाले स्थापना गरेको कृष्ण सेन इच्छुक स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार नवराज शर्मालाई प्रदान गरिएको छ । इच्छुकको १६ औं स्मृति दिवसका अवसरमा एक कार्यक्रमका बीच उक्त पुरस्कार वितरण गरिएको हो । सो अवसरमा पाँच हजार पाँच सय पचपन्न रुपैयाँ राशीको पुरस्कार वितरण गर्नुका साथै जिल्लाका विविध […]
२०५९ सालको कुरा हो, मंगलबार राति हामीलाई स्रोतले फोन गरेर साउतीको स्वरमा भन्यो –‘कृष्णलाई त मा¥यो नि ।’ को कृष्ण ? उसले सबै भन्न सकेन । संकटकालको बेला थियो, सेना प्रहरी सबैले प्रेसलाई सताइराखेको अवस्था थियो, दरबार हत्याकाण्ड भएर ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएको वर्ष दिन पुग्दै थियो । हामीलाई यसरी सूचना दिने व्यक्ति कृष्ण सेन मारिएको […]
स्मरण अर्थात् बितेको कुराको याद गर्नु या सम्झना गर्नु यत्ति हो शब्द स्मरणको अर्थ तर होइन, स्मरणको गहिराइमा पुगेर छाम्यो भने स्मरणको छायाँमा उत्कण्ठा र प्रेरणा, विष्मय र उल्लास, पीडा र गौरव, भावना र विचार छिपेको ठान्छु । कति अजीव छ हैन त स्मरणको परिधि ! हो मलाई कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ को स्मरण गर्दा यस्तै […]
१. जीवन वृत्त कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ समाजवादी यर्थाथवाद अर्थात् प्रगतिवादी धाराका सशक्त कवि हुन् । साहित्यिक व्यक्तित्वबाहेक उनका सांस्कृतिक, राजनीतिक र पत्रकार व्यक्तित्व पनि छन् । महान् उद्देश्य र आस्थाका लागि एउटा स्रष्टाले कसरी आफूलाई समर्पित र बलिदान गर्न सक्छ भन्ने कुराका उनी राम्रा उदाहरण हुन् । पिता यामबहादुर सेन र माता भीमकुमारी सेनको कोखबाट […]
काठमाडौं, ६ जेठ । चितवनको खैरेनी नगपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको सैनिक आवासिय महाविद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थी श्रीनव लामिछानेमाथि हत्या गर्ने प्रयास भएको भन्दै पीडित परिवारले सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्ने माग गरेको छ । गत बैशाख २८ गते लामिछानेलाई राति ३ बजे सोही स्कुलमा पढ्ने कृष थापा, रिवाज रेग्मी र अनिश श्रेष्ठले […]
२९ बैशाख २०७५, शनिबार २३:३९ May 14, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडौं, २९ बैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागी कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध गरिएपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित राष्टिय सभागृहमा प्रम मोदीका लागि आयोजित एक कार्यक्रममा प्रवेश पास लिएका सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रवेश गर्न नदिइएपछि सञ्चारकर्मीहरुले आफ्ना सञ्चारसाधन सडकमा राखेर विरोध समेत प्रदर्शन गरेका छन् । शनिवार दिउसो राष्टिय सभागृहभित्र प्रम मोदी प्रवेश […]